Waxsii sheegista Baybalka, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
wax sii sheegidda Bible
Masiixiyiin badan ayaa u baahan dulmar guud oo wax sii sheegis ah si ay u arkaan wax sii sheegidda aragtida saxda ah. Tani waa sababta oo ah Masiixiyiin badan ayaa si xad dhaaf ah u buunbuuniya wax sii sheegidda oo waxay sheegtaan inaysan taageeri karin. Dadka qaar, wax sii sheegidu waa caqiidada ugu muhiimsan. Waxay kujirtaa meesha ugu badan ee barashadaada Kitaabka Quduuska ah, waana mawduuca aad rabto inaad aad u maqasho. Buugag cusub oo Ammaandoon ayaa si fiican u iibiya. Masiixiyiin badan ayaa si wanaagsan ufiican inay u fiirsadaan waxa ay aaminsanaantu ka oranayso wax sii sheegidda Baybalka.
Bayaankayagu wuxuu leeyahay saddex jumlado:
Kii hore wuxuu leeyahay wax sii sheegidu waa qayb ka mid ah waxyiga Eebbe inagu muujiyey, wuxuuna noo sheegayaa wax ku saabsan cidda uu yahay, waxa uu yahay, waxa uu doonayo, iyo waxa uu sameeyo.
Jumladda labaad waxay sheegaysaa in wax sii sheegidda Baybalka ay badbaadada ka hesho Ciise Masiix. Micnaheedu maahan in wax sii sheegidduba ay la xidhiidho cafiska iyo aaminaada Masiixa. Waxaan wali sheegnaa in wax sii sheegistu tahay meesha kaliya ee Ilaah waxyaalahan ka muujiyo badbaadada. Waxaan dhihi karnaa waxoogaa sii sheegidda Baybalka waxay ku saabsantahay badbaadada xagga Masiixa ama waxsii sheegiddu waa mid ka mid ah qaabab badan oo Ilaah ku muujiyo cafiska xagga Masiixa.
Sababta oo ah qorshaha Ilaah wuxuu diiradda saarayaa Ciise Masiix oo wax sii sheegiddu waxay qayb ka tahay muujinta Ilaah ee doonistiisa, waa lama huraan in wax sii sheegistu ay si toos ah ama si aan toos ahayn ula xiriirto waxa Ilaah ku dhex jiro iyo xagga Ciise Masiix. Laakiin isku dayi mayno inaan tilmaano wax sii sheegid kasta oo halkan ah - waxaan bixinaynaa hordhac.
Bayaankayaga waxaan rabnaa inaan siino aragti caafimaad leh oo ku saabsan sababta wax sii sheegiddu u jirto. Bayaankayagu wuxuu taaganyahay diidmo sheegashada ah in wax sii sheegidda in badan laga hadlayo mustaqbalka, ama inay diiradda saareyso dadka qaarkood. Waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan wax sii sheegidda maahan mid ku saabsan dadka mana aha mustaqbal, laakiin waxay ku saabsan tahay tawbadkeenka, iimaanka, badbaadada iyo nolosha halkan iyo maanta.
Haddii aan ku sameyn lahayn sahan maqaayadaha badankood, waxaan shaki ku qabaa in dad badani ay dhihi doonaan wax sii sheegiddu waxay ku saabsan tahay cafiska iyo iimaanka. Waxay u maleynayaan inay culeys saareyso waxyaabo kale. Laakiin wax sii sheegiddu waxay ku saabsan tahay badbaadada xagga Ciise Masiix, iyo sidoo kale waxyaabo kale oo tiro badan. Markay malaayiin fiiriyaan wax sii sheegidda Baybalka si loo go'aamiyo dhammaadka adduunka, markay malaayiin la wadaagaan wax sii sheegidda dhacdooyinka mustaqbalka dhaca, waxay ka caawinaysaa inay dadka xusuusiso in ujeedka wax sii sheegidda ay tahay in la muujiyo in dembiilaha aadamiga lagu cafiyi karo shaqada badbaadada ee Ciise Masiix.
Waxaan jeclaan lahaa inaan waxyar ka idhaahdo warbixinteena. Marka hore, waxay leedahay dembiga bini aadamka waa la cafiyi karaa. Ma dhaho dembiyada aadanaha. Waxaan ka hadlaynaa xaalada aasaasiga ah ee bina aadamka, kaliya ma ahan natiijooyinka shaqsiyadeed ee dembigeenna. Waa run in dembiyada shakhsiyadeed la cafiyi karo markay rumaystaan ​​Masiixa, laakiin waxaaaba ka sii muhiimsan in dabeecaddeenna qaladka ah, oo ah asalka dhibaatada, sidoo kale la cafiyo. Marna ma haysan doonno waqti ama xigmad aan kaga toobadkeenno dembi kasta. Cafisyadu kuma xirna awoodda aan u liis garaynno dhammaantood. Taas beddelkeeda, waxay u saamaxaysaa Masiixu innaga in dhammaantooda, iyo dabeecaddayada dembiga leh ee xudunta u ah, la cafiyo hal mar oo isku dhacay.
Marka xigta waxaan aragnaa in dembiyadeenna lagu cafiyo rumaysadka iyo tawbadkeenka. Waxaan rabnaa inaan siinno ballanqaad hubaal ah in dembiyadeenna la cafiyey iyo in la cafiyey iyagoo ku salaynaya tawbadkeenka iyo rumaynta shaqada Masiixa. Tani waa hal meel oo laga sii sheego. Iimaanka iyo tawbadkeenku waa laba dhinac oo isku mid ah. Waxay u dhacaan si isku mid ah waqti isku mid ah, in kastoo aaminaadku ay ugu horreyso macquul ahaan. Haddii aan badalno dabeecaddeena annaga oo aan rumeysaneyn ma ahan nooca toobadda ee u horseedda badbaadada. Toobada oo ay weheliso iimaanka ayaa waxtar u leh badbaadada. Rumaysadku waa inuu marka hore yimaadaa.
Waxaan had iyo jeer sheegnaa inaan u baahan nahay rumaysad xagga Masiixa. Taasi waa sax, laakiin jumladdani waxay leedahay waxaan u baahan nahay rumayn hawshiisa badbaadada. Kaliya ma aamino isaga - waxaan sidoo kale aaminsanahay wax uu qabtay kaas oo noo suuragelinaya in la cafiyo. Keligiis maahan isaga inuu yahay qof cafiya dembiyadeenna - sidoo kale waa wax uu qabtay ama wax uu sameeyo.
Qoraalkan ma cadaynayno shaqadiisa badbaadada. Bayaankayaga ku saabsan Ciise Masiix wuxuu leeyahay inuu "u dhintay dembiyadeenna" iyo inuu "dhexdhexaadiyo inta u dhexeysa Ilaah iyo dadka". Waa shaqadii badbaadada ee ahayd inaan rumeysanno oo aan ku helno cafis.
Hadalka fiqi ahaaneed, dadku waxay ku heli karaan cafis si fudud markay rumaystaan ​​Masiixa, iyagoo aan haysan wax aaminaad ah oo sax ah oo ku saabsan sida Masiixu awood inoogu yeelo. Ma jiro aragti gaar ah oo ku saabsan kafaaraggudka Masiixa ee loo baahan yahay. Ma jiraan aaminsanaan gaar ah oo ku saabsan doorkiisa dhexdhexaadiye ee lagama maarmaanka u ah badbaadada. Si kastaba ha noqotee, Axdiga Cusub dhexdiisa way ku cadaatay in badbaadadeenna ay suurta gashay dhimashadii Masiixa ee iskutallaabta lagu qodbay, oo isagu waa wadaadka sare ee inoo qaabilsan. Markaan aaminsanahay in shaqada Masiixu inay waxtar u leedahay badbaadadeenna, waxaynu la kulannaa cafis. Waan aqoonsan nahay oo ku caabudnaa Badbaadiye iyo Rabbi. Waxaan ognahay inuu inagu aqbalay jacaylkiisa iyo nimcadiisa, oo aan aqbalno hadiyaddiisa cajiibka ah ee badbaadada.
Bayaankayagu wuxuu sheegayaa in wax sii sheegiddu wax ka qabato faahfaahinta farsamo ee badbaadada. Waxaan ka heli caddayn taas oo ah Qorniinka, kaas oo aan soo xiganayno dhammaadka bayaankeenna - Luukos 24.
Halkaas ayuu Ciise kuwii sara kacay ka dib waxoogaa u sharraxay laba xer oo jidka u ah Emmaus. Waxaan soo xiganaynaa aayadaha 44 illaa 48, laakiin waxaan sidoo kale ku dari karnaa aayadaha 25 illaa 27: “Markaasuu wuxuu ku yidhi, Nacasyo yahow, qalbigoodu qumman yahay inuu rumaysto wixii nebiyada oo dhammi ay hadleen! Masiixu miyaanay waajib ku ahayn inuu sidan ku silco oo uu ammaantiisa galo? Markaasuu ku bilaabay Muuse iyo nebiyada oo dhan, oo wuxuu ugu caddeeyey wixii ku saabsanaa Qorniinka oo dhan, (Luukos 24,25-27).
Ciise ma uusan oran in Qorniinku uu ka hadlay oo keliya isaga ama in wax kasta oo sii sheegiddu ay isaga ku saabsan tahay. Waqti uma helin inuu ku sii maro Axdigii Hore oo dhan. Waxsii sheegyada qaar waxay ahaayeen isaga ku saabsan qaarna waxay ahaayeen kuwo aan toos ahayn oo isaga ku saabsan. Ciise wuxuu sharraxay waxsii sheegyada sida tooska ah loogu tilmaamo isaga. Xertiisii ​​waxay rumaysteen qayb ka mid ah wixii nebiyada ay qoreen, laakiin way ka gaabiyeen inay wax walba rumaystaan. Waxay seegteen qayb ka mid ah sheekada oo Ciise buuxiyey nusqaamaha oo wuu u sharxay iyaga. In kasta oo qaar ka mid ah waxsii sheegyada reer Edom, Moo'aab, Ashuur, ama Masar qaarna ay ka hadlayeen reer binu Israa'iil, qaar kalena waxay ka hadlayeen silica iyo dhimashada Masiixa iyo sarakiciddiisa ammaanta. Ciise ayaa u sharaxay iyaga.
Sidoo kale ogsoonow in Ciise ku bilaabay buugaagta Muuse. Waxay ka kooban yihiin waxsii sheegyada Masiixiyiinta ah, laakiin inta badan Shanta kitaabku waxay ku saabsan tahay Ciise Masiix qaab kale - marka loo eego suugaanta, allabari, iyo cibaadooyinka wadaadnimada ee sii sheega shaqada Masiixa. Ciise sidoo kale wuu sharxay fikradahan.
Aayadaha 44 illaa 48 ayaa inbadan na sii sheegaya: "Laakiin wuxuu ku yidhi, Kuwani waa ereyadaydii aan idinku idhi intaan weli idin dhex joogo: Wax kasta oo aan qoro waa inay ku dhacaan sharciga Muuse , nebiyadii iyo sabuurradii " (V. 44). Mar labaad, isagu ma uusan oran in faahfaahin kasta ay isaga ka saabsan tahay. Waxa uu yidhi waa in qaybaha isaga ku saabsanaa ay noqdaan in la fuliyo. Waxaan u maleynayaa inaan ku dari karno in wax walba aysan aheyn in la fuliyo markii ugu horeysay. Waxsii sheegyada qaar waxay u muuqdaan inay tilmaamayaan mustaqbalka, soo laabashadiisa, laakiin sida uu sheegay, waxay tahay inay noqdaan. Ma aha oo keliya in wax sii sheegiddu ay tilmaamaysay isaga - sharciga ayaa sidoo kale tilmaamay isaga, iyo shaqada uu u qaban doono badbaadadeenna.
Aayadaha 45-48: "Markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan Qorniinka, oo wuxuu ku yidhi: Waa qoran tahay in Masiixu silcin doono oo uu maalinta saddexaad ka soo sara kici doono, iyo in magiciisa lagu wacdiyo toobadda dembidhaafka dadka oo dhan. Ka bilow Yeruusaalem oo ka marag noqo. ”Halkan Ciise wuxuu ku sharraxay waxsii sheegyada isaga ku saabsan. Ma aha oo keliya sheegiddu inay tilmaamayso silica, dhimashada iyo sarakicidda Masiixa - sheegiddu waxay sidoo kale tilmaamtay farriinta toobadda iyo dembidhaafka, waana farriin loogu dhawaaqi doono dadka oo dhan.
Waxsii sheegistu waxay taabataa waxyaabo badan oo kala duwan, laakiin waxa ugu muhiimsan ee ay kusaabsan tahay iyo waxa ugu muhiimsan ee ay kashifayso waa xaqiiqda ah inaanu ku heli karno cafis dhimashada Masiixa. Sidii Ciise ku adkeeyay ujeeddadan wax sii sheegidda ee ku socota jidka Emmaus, sidaas oo kale ayaan u xoojinaynaa ujeeddadan wax sii sheegidda ee bayaankeenna. Haddii aan xiisaynayno wax sii sheegidda, waa inaan hubnaa inaanan ku seegin qaybtan marinka. Hadaanan fahmin qaybtaan fariinta ah, wax kale oo na caawimaayaa ma jiraan.
Waxaa xiiso leh in la akhriyo Muujintii 19,10 maskaxda lagu hayo: "Laakiin maragguu waa Ciise waa ruuxa wax sii sheegista." Fariinta ku saabsan Ciise waa ruuxa wax sii sheegista. Taasi waa waxa ay ku saabsan tahay. Nooca wax sii sheegidu waa Ciise Masiix.
Saddex ujeeddo kale
Xukunkayaga seddexaad wuxuu ku darayaa faahfaahinta badan ee ku saabsan wax sii sheegidda. Wuxuu yiri: "Waxsii sheegiddu waxay ku dhawaaqdaa Ilaah inuu yahay Abuuraha Qaadirka ah iyo Xaakinka wax walba wuxuuna xaqiijinayaa aadanaha jacaylkiisa, nimcadiisa iyo aaminnimadiisa wuxuuna rumeeysanuhu rumeeysan yahay nolol cibaado leh oo ku dhex jira Ciise Masiix."
Halkan waxaa ah saddex ujeeddooyin kale oo sheegid ah. Marka hore, waxay noo sheegaysaa in Ilaah yahay xukunka wax walba xukuma. Midda labaad, waxay noo sheegaysaa in Eebbe yahay mid jecel, naxariis badan, oo aamin ah. Midda saddexaadna, wax sii sheegiddaas waxay nagu dhiirrigelineysaa inaan si habboon ugu noolaano. Aynu si dhow u eegno seddexdan ujeeddo.
Wax sii sheegidda Baybalku waxay inoo sheegaysaa in Ilaah yahay xikmad, inuu leeyahay amar iyo amar wax walba. Waxaan soo xiganaynaa Ishacyaah 46,9: 11, oo ah marin taageeraya qodobkan. Xusuuso waagii hore, sidii ay ahayd wakhtiyadii hore. Waxaan ahay Ilaah, oo mid kale ma jiro, Waxaan ahay Ilaah wax aan la mid ahayn. Bilowgii waxaan ku dhawaaqay wixii iman doona, iyo waxa ka sii dambeeya, waxa weli dhacaya. Waxaan idhaahdaa: waxaan go’aansaday inay dhacaan, wax walbana oo aan maskaxda ku hayo ayaan sameeyaa. Waxaan uga yeedhaa gorgor ka yimaada bariga, oo dal fog ka imanaya ninka fuliya taladayda. Sidii aan u idhi, Waan sii daynayaa; Wixii aan qorsheeyeyna waan samaynayaa.
Qaybtan, Ilaah wuxuu leeyahay wuxuu noo sheegi karaa sida wax walba ku dhamaan doonaan, xitaa markay bilaabato. Ma aha wax adag in bilowga wax laga sheego bilowga ka dib markii wax walba dhacaan, laakiin Ilaah keliya ayaa sheegi kara dhammaadka bilowga. Xitaa wakhtiyadii hore, wuxuu awood u lahaa inuu saadaaliyo waxa dhici doona mustaqbalka.
Dadka qaarkiis waxay yiraahdaan Ilaah wuu sameyn karaa tan maxaa yeelay isagu wuxuu arkaa mustaqbalka. Waa run in Ilaah arki karo mustaqbalka, laakiin tani ma aha ujeeddada uu Ishacyaah higsanayo. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday ma aha wax aad u badan in Ilaah arko ama uu horay u garto, laakiin waa in Ilaah soo faragaliyo taariikhda si loo hubiyo inay taasi dhacdo. Wuu keenayaa, xitaa haddii kiiskan uu u yeedho nin reer bari ah si uu howsha u qabto.
Ilaah wuxuu sii daawan doonaa qorshihiisa hore, muujintaana waa waxa aan ugu magacdarnay wax sii sheegidda - wax la sii sheegi doono ka hor. Sidaa darteed wax sii sheegidu waa qayb ka mid ah muujinta Eebbe ee doonistiisa iyo ujeeddadiisa. Markaa, maxaa yeelay waa doonista Ilaah, qorshaha, iyo doonistiisa, isagu wuxuu hubiyaa inay taasi dhacdo. Wuxuu sameyn doonaa wax kasta oo uu jecel yahay, waxkastoo uu doonayo inuu sameeyo maxaa yeelay awood ayuu u leeyahay inuu sameeyo. Isagu waa u taliyaa quruumaha oo dhan.
Daanyeel 4,17: 24 wuxuu inoo sheegayaa isla shaygii. Tani waxay dhacdaa isla marka uu Daanyeel ku dhawaaqo in Nebukadnesar yaan maskaxdiisu waayi doonin ilaa toddobo sano, oo wuxuu bixiyaa sababahan soo socda: “Waa go’aankii Ilaaha ugu sarreeya Eebahay Boqorka ah, Oo waa lagaa saari doonaa dadka dibadda u bax, oo waa inaad la joogtaa xayawaanka duurka jooga, oo iyaguna waxay kuu oggolaan doonaan inaad cawska u cuntaan sida xoolaha, oo waxaad ku seexan doontaa sayaxa samada, oo waad qofiqi doontaa, oo toddoba goor ayaa kugu soo dhaafi doona ilaa aad ka ogaato taas Awoodda ugu sareysa ayaa ka sarreysa boqortooyooyinka dadku waxayna siiyaan cidda uu doonayo " (Daanyeel 4,21: 22).
Markaa wax sii sheegidda waxaa loo bixiyay oo la fuliyay si dadku ay u ogaadaan in Ilaah yahay Ilaaha ugu sarreeya dadka oo dhan. Wuxuu leeyahay awood uu qof ugu isticmaalo sida taliye, xitaa kan ugu hooseeya dadka. Ilaah awood buu siin karaa cidda uu doonayo inuu siiyo maxaa yeelay isagu waa boqor. Tani waa farriin nalooga soo gudbiyay iyada oo loo sii marayo wax sii sheegidda Baybalka. Waxay ina tusaysaa in Eebbe awood u leeyahay.
Wax sii sheegistu waxay noo sheegaysaa in Ilaah yahay xaakinka. Waxaan tan ku arki karnaa wax badan oo ka sii sheegiddii Axdigii Hore, gaar ahaan waxsii sheegyada ku saabsan ciqaabta. Ilaah wuxuu ku siiyaa waxyaabo xunxun maxaa yeelay dadku waxay sameeyeen shar. Ilaah wuxuu u dhaqmaa sidii xaakin awood u leh inuu abaalmariyo oo ciqaabo oo awood u leh inuu hubiyo in la fuliyay.
Waxaan soo xiganaynaa Yuudas 14-15 sababtan awgeed: “Laakiin Henoch oo ahaa kii toddobaad, Adam, ayaa isna wax sii sii sheegay kuwaan, oo wuxuu yidhi, Bal eega, Rabbigu wuxuu la yimid kunka quduusiintiisa ah inuu dadka oo dhan xukumo oo uu ciqaabo dadka oo dhan. maxaa yeelay, cibaadola'aantooda oo dhan waxay beddeleen cibaadola'aantooda iyo wax kasta oo karaahiyada ah oo dembilayaashu faaradu isaga ka sheegeen.
Halkan waxaan ku aragnaa in Axdiga Cusubi uu soo xiganayo wax sii sheegid aan laga heli karin Axdigii Hore. Waxsii sheegiddan waxay ku jirtaa buugga Apocryphal 1 Enoog, oo waxaa lagu daray Kitaabka Quduuska ah, waxayna qayb ka noqotay koontada la waxyooday ee wixii wax sii sheegiddu muujiso. Waxay daaha ka qaadday in Sayidku imanayo - kaas oo weli ah mustaqbalka - iyo inuu isagu xukumo umad kasta.
Jacayl, naxariis iyo daacadnimo
Aaway waxsii sheegiddu noo sheegtay in Eebbe yahay mid jecel, naxariis badan, oo aamin ah? Aaway wixii lagu sheegay wax sii sheegidda? Uma baahnin saadaalinno si aan u waajahno dabeecadda Ilaah maxaa yeelay had iyo goor waa isku mid. Waxsii sheegista Baybalku waxay daaha ka qaadaysaa wax ku saabsan qorshaha Ilaah iyo ficiladiisa, waana lama huraan inay iyadu wax ka ogaato dabeecaddiisa anaga. Qorshahiisa iyo qorshayaashiisa ayaa si aan macquul ahayn u muujin doona inuu isagu yahay nin jecel, naxariis badan, oo aamin ah.
Waxaan ka fekerayaa halkaan ee Yeremyaah 26,13: "Haddaba jidadkiinna iyo falimihiinnaba hagaajiya, oo codka Rabbiga Ilaahiinna addeeca, oo markaasaa Rabbigu toobad keenayaa sharkii uu kugu hadlay." Markii dadku beddelaan , ka dibna Ilaah waa ku siin doonaa; isagu kama walwalo inuu ciqaabo; wuxuu diyaar u yahay inuu bilaabo bilow cusub. Cadho malaheyn - waa nin naxariis badan oo diyaar u ah inuu cafiyo.
Tusaale ahaan aaminnimadiisa, waxaan eegi karnaa wax sii sheegidda ku sugan Laawiyiintii 3:26,44. Qaybtani waxay digniin u tahay reer binu Israa'iil in haddii axdigii uu jebiyo, ay jabi doonaan oo maxaabiis ahaan loo kaxaysto. Laakiin markaa dammaanaddan ayaa lagu daray: "Laakiin xitaa haddii ay ku sugan yihiin waddanka cadowga, weli anigu ma diidi karo mana ihi necbahay iyaga, sidaa darteed waa in laga gudbo iyaga." iyo jacaylkiisa, xitaa haddii ereyadan gaarka ah aan la adeegsan.
Hoosheeca 11 waa tusaale kale oo jacaylka aaminka ah ee Ilaah. Xitaa ka dib markii la sharraxay sida reer binu Israa'iil ee aan aaminka ahayn ay ahaayeen, aayadaha 8-9 waxaa loo aqriyaa: “Qalbigaygu waa fikir ka duwan kan kale, naxariistayda oo dhammuna waa dab. Ma doonayo inaan sameeyo wax aan ku sameeyo reer Efrayim cadhadayda kulul kadib. Maxaa yeelay anigu waxaan ahay Ilaah oo ma ihi nin waxaan ahay Quduuska dhexdaada oo ma doonayo inaan noqdo mid waxyeello keena. ”Waxsii sheegiddani waxay muujineysaa jacaylka joogtada ah ee Eebbe ee dadkiisa.
Waxsii sheegyada Axdiga Cusub waxay sidoo kale ina xaqiijinayaan in Eebbe yahay mid jecel, naxariis badan, oo aamin ah. Isagaa sara kici doona kuwa dhintay wuuna na abaal marin doonaa. Waan la noolaan doonnaa waxaanan ku raaxaysan doonaa jacaylkiisa weligiis. Waxsii sheegista Baybalku waxay noo xaqiijineysaa inuu Eebbe damacsan yahay inuu tan sameeyo, iyo waxyaabihii hore ee waxsii sheegistu waxay noo xaqiijinayaan inuu awood u leeyahay inuu sameeyo oo sameeyo wixii uu damacsanaa inuu sameeyo.
Waxaa lagu kiciyay nolol cibaado leh
Ugu dambeyntiina, bayaanku wuxuu sheegayaa in wax sii sheegidda Baybalka ay dhiirrigeliso rumaystayaasha inay ku noolaadaan nolol cibaado leh oo ku jirta Ciise Masiix. Sidee taasi u dhacdaa? Tusaale ahaan, waxay nagu dhiirrigelisaa inaan u jeedno xagga Ilaah maxaa yeelay waxaa naloo xaqiijiyay inuu isagu doonayo waxa ugu fiican annaga, oo mar walbana wanaag ayaan heli doonnaa markaan aqbalno wuxuu na siinayo, ugu dambayntiina waxaan ku heli doonnaa shar markii annagana ma
Xiriirintan waxaan ka soo xiganaynaa 2 Butros 3,12: 14: “Laakiin maalinta Rabbigu waxay u iman doontaa sida tuug oo kale; Kolkaasaa samooyinku waxay la dhalaali doonaan halligaad weyn. laakiin waxyaalaha ku jira ayaa ku dhalaali doona kulaylka, oo dhulka iyo waxyaalaha ka shaqeeyaba waxay heli doonaan xukunkooda. Haddii waxaas oo dhami ay dhalaali doonaan, sidee baad ugu dhex istaagi kartaa socod quduus ah iyo cibaado leh?
Waa inaan fiirino maalinta Rabbiga intii aan ka cabsan lahayn, oo waa inaan ku noolaano nolol cibaado leh. Malaha wax fiican ayaa nagu dhici doona haddii aan sidaas yeelno, iyo wax aan yarayn haddii aan sidaas yeelno. Waxsii sheegiddu waxay nagu dhiirrigelisaa inaan ku noolaano nolol cibaado leh maxaa yeelay waxay noo muujineysaa in Eebbe ajar ku siiyo kuwa isaga dooni kara.
Aayadaha 12-15 waxaan akhrinaa: “… yaa sugaya oo u halgama imaatinka maalinta Ilaah, goortii samooyinku dhalaali doonaan oo waxyaabuhu kululu ka dhammaan doonaan. Laakiin waxaan sugaynaa samad cusub iyo dhul cusub ballanqaadkiisii, oo xaqnimadu ku jirto. Sidaas daraaddeed, gacaliyayaalow, intaad sugtaan, isku dadaal inaad kuwa isaga hortiisa ku naxdaan oo aad xasilloonaan ku ahaataan, iyo Rabbigeenna adkaynta badbaadadiinna iyo weliba walaalkeen gacaliye Bawlos sida xigmadda lay siiyey. ayaan kuu qoray. "
Qorniinkan wuxuu ina tusayaa in wax sii sheegidda Baybalka ay nagu dhiirigelineyso inaan sameeyno dadaalkasta oo aan ku dhaqanno oo aan si sax ah u fikirno, oo aan ku noolaano nolol cibaado leh, oo aan Ilaah la nabad galno. Sida kaliya ee tan loo sameeyo, dabcan, waa in lagu maro Ciise Masiix. Laakiin kitaabkan gaar ah, Eebbe wuxuu noo sheegayaa inuu yahay samir, aamin, iyo naxariis.
Doorka socda ee Ciise halkan waa muhiim. Nabad la lahaanshaha Ilaah waa suurtagal keliya maxaa yeelay Ciise wuxuu ku fadhiyaa gacanta midig ee Aabaha wuxuuna noo taagan yahay wadaaddo sare. Sharciga Muuse ayaa muujiyey oo saadaaliyay qaybtan shaqada madax furashada ee Ciise; Isaga xaggiisa waxaa ina xoojiyay inaan ku noolaano nolol cibaado leh, inaan dadaalno oo dhan, oo aan ka nadiifno wasakhda aan ku heshiisno. Waa iyada oo lagu rumeeysto isaga inuu yahay wadaadkayaga sare inaan ku kalsoonaan karno in dembiyadeenna la cafiyey oo badbaadada iyo nolosha weligeed ah la dammaanad qaaday.
Waxsii sheegiddu waxay noo xaqiijineysaa naxariista Eebbe iyo sida aan ku badbaadi karno Ciise Masiix.
Wax sii sheegidu maahan waxa kaliya ee nagu dhiirigaliya inaan ku noolaano nolol cibaado leh. Abaalmarinta mustaqbalkeena ama ciqaabtaada kaliya maahan sababta ugu noolaanshaha cadaalad. Waxaan ka heli karnaa dhiirigelin habdhaqanka wanaagsan waqtigii hore, kan hada iyo mustaqbalkaba. Waagii hore maxaa yeelay Ilaahay wuu inagu fiicnaa oo u mahadceliyay wixii uu horay u sameeyay annaguna waxaan diyaar u nahay inaan sameyno wuxuu yiraahdo. Ujeedada aan hadda u leenahay nolosha kaliya waa jacaylka aan u qabno Ilaah; Ruuxa Quduuska ah ee ina dhex jooga ayaa na siiya rabitaan aan ku qanacno ficilkeenna Mustaqbalka sidoo kale wuxuu caawiyaa dhiirrigelinta dhaqankeenna - Ilaah wuxuu naga digayaa ciqaab, malaha maxaa yeelay isagu wuxuu doonayaa digniintaas inay nagu dhiirrigeliso inaan beddelno dhaqankeenna. Waxay kaloo ballan qaadaysaa abaalmarinno, iyadoo la ogyahay inay iyaguna na dhiirrigeliyaan. Waxaan rabnaa inaan helno abaalmarinta uu na siiyo.
Dabeecaddu had iyo goor waxay ahayd sabab sii sheegid. Waxsii sheegiddu maahan oo keliya saadaalin, waxay sidoo kale ku saabsan tahay dejinta tilmaamaha Eebbe. Taasi waa sababta waxsii sheegyada badan ay shardi u ahaayeen - Ilaah wuxuu uga digay ciqaabta wuxuuna rajeynayaa toobad si ciqaabtu aysan u dhicin. Waxsii sheegyada looma siin wax faa iido ah oo kusaabsan mustaqbalka - waxay ujeedo u lahaayeen hada.
Sekaryaah wuxuu soo wada ururiyey farriinta nebiyada isagoo ah yeedh isbadal. Rabbigu wuxuu leeyahay Seba'ood, toobad keena jidadkaaga sharka ah iyo falimahaaga sharka ah. Oo Rabbigu wuxuu leeyahay, Iyagu way igu caasiyoobeen, oo dhegna iima ay dhigin. (Zakariah 1,3-4). Waxsii sheegiddu waxay noo sheegaysaa in Ilaah yahay xaakin naxariis leh, iyo waxa uu Ciise inoo sameeyo, waan badbaadi karnaa haddii aan isaga aaminno.
Waxsii sheegyada qaarkood waxay leeyihiin meel fog oo aaney ku xirnaaneyn inay dadku sameeyeen wanaag iyo xumaanba. Waxsii sheegyada oo dhami maahan ujeeddadan. Runtii, waxsii sheegyadu waxay ku yimaadaan noocyo badan oo kala duwan oo ay adag tahay in la sheego marka laga reebo marka loo eego guud ahaan ujeedada waxsii sheegyada oo dhan u adeeg. Qaar waxay ujeedo yihiin ujeedadan, qaar waxay ujeedo u yihiin ujeedadaas qaarna ma hubno waxay yihiin.
Haddii aan isku dayno inaan samayno bayaan rumaysad oo ku saabsan wax ku kala duwan sidii wax sii sheegidda, waxaan samayn doonaa bayaan guud maxaa yeelay waa sax: wax sii sheegidda Baybalku waa mid ka mid ah siyaabaha Ilaah inoogu sheego waxa uu sameeyo iyo farriinta guud ee wax sii sheegidda waxay noo sheegaysaa waxa ugu muhiimsan ee Eebbe sameeyo: Waxay ina hoggaamisaa xagga badbaadada xagga Ciise Masiix. Waxsii sheegiddu waxay nooga digayaa
Xukunka soo socda, wuxuu noo xaqiijinayaa nimcada Ilaahay sidaa darteedna wuxuu nagu dhiirrigelinayaa inaan toobadkeenno
si aad ugu biiraan barnaamijka Eebbe.